Andivumelani no-Elliot ukuba kufuneka itshatyalaliswe. Ukusebenza kwicandelo lokuThengisa, uyaqonda ukuba kukho imeko yomhlambi kuyilo. Iinkampani ezinje iapile baneepokotho ezinzulu kwaye banolindelo loyilo lobuhlakani olunxulunyaniswa nophawu lwabo. Umthengi ulindele ukuba uyilo olunxulunyaniswa neemveliso zika-Apple, ukupakisha kunye nentengiso ziya kwaphula umhlaba omtsha. (Ngaphandle kweentengiso zemvelaphi emnyama kunye nokukhanya okukhanyayo kwelinye icala lesithethi… Ndicinga ukuba kubonakala kuyinto ehlekisayo).
Zonke ezinye iinkampani zikulungele ukulandela ukhokelo. Kanye njengokuba ifashoni ilandela imikhwa, kunjalo uyilo. 'Umhlambi' uyayixabisa i-aesthetics ebonisayo ebonisa ukuba inxulumene nomkhwa othile okanye itekhnoloji. Xa ndifumana isicelo esitsha njenge Umxubex or rssHugger, Phambi kokuba ndide ndifake isicelo, ndibethwe ngumbono obonakalayo wokuba esi sisicelo esakhelwe kwitekhnoloji entsha.